Aamin in wax aan macquul aheyn. - Lama yaqaan - Quotes Pedia
Aamin in wax aan macquul aheyn. - Lama yaqaan
Rumayso taas wax aan macquul aheyn nolosha. Haa, dadka maanta guulaystay waxay gaadheen meelihii ay u socdeen oo keliya sababtoo ah xaqiiqda ah inaynan quusan. Waxay ku kalsoonaayeen awooddooda, waxayna sii wadeen inay si adag u shaqeeyaan si ay u gaaraan.
Ogow guushu weligeed cidna kuma timaado habeen keliya. Waxay ubaahantahay dhidid iyo dhiig si loo arko markhaati, qofkii u hogaansama taa waxaa hubaal ah inuu dhadhamin doono midhaha guusha maalin un.
Si aad ugu guuleysato noloshaada, meel kasta oo aad ku nooshahay, waa inaad aamintaa xaqiiqda ah 'wax aan macquul aheyn!'
Kaliya markii aad aaminto in waxaas oo dhan ay gacantaada kujiraan inaad runti ku kalsoontahay kartidaada, taasina waxay aakhirka kugu hogaamin doontaa inaad gaadho meesha ugu sarreysa ee guusha goor dhaw ama goor dambe. Guusha maanta ma gaari kartid lafteeda, laakiin haddii aad leedahay hadaf aad gaartid, waa inaad ku sii socotaa dhankaas.
Waqtiyada qaarkood, waxaan ka baqeynaa socodka kaliya markaan aragno carqalada nagu soo food leh si aan guul u gaarno. Waa inaadan noqon kan sidaas samaynaya!
Ogow wadada guusha ma noqon doonto mid hagaagsan waligeed! Waa inaad u dulqaadataa dhibaatooyinka oo dhan, oo kaliya markaad ka gudubto caqabadahaas oo dhan, waxaad awoodi doontaa inaad gaarto bartilmaameedkaaga.
Badanaa, dadku way ku daalaan inay ka gudbaan caqabadahan, waana marka ay u muuqdaan inay aqbalaan guuldarada. Ogow guushu maahan inaad dhowr jeer guul darreysato; waxay ku saabsan tahay markaad diidan tahay inaad kacdo.
Waxaa laga yaabaa inaad u adkeysato dhibaatooyin badan, laakiin waa inaad ku dhex xoog badnaataa gudaha! Ku sii wad inaad ka gudubto caqabadahaas oo dhan, oo go aana oo u jiheysta himiladaada Haddii aad u heellan tahay shaqadaada, wax kaa adkaan kara ma jiraan.
Waa lagama maarmaan in la fahmo in wax adduunkan ka jira aan suurtagal ahayn, kuwa maanta ku guuleystayna waxay soo mareen mid kasta oo ka mid ah wejiyadaan ka hor intaanay dhab ahaan guuleysan.
Sidaa awgeed, kama tihid ka reebitaan fursad kasta. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad fahanto mid kasta oo ka mid ah caqabadahaas ayaa loogu talagalay inay ku baraan cashar oo ay ku siiyaan qaar ama khibradaha kale.
Sii wad socodka, hana aqbalin guuldarada. Maalinta aad diyaar u tahay inaad xaqiiqadan aqbasho, hubaal waad guuleysan doontaa.
Kaliya ha u oggolaan nooc kasta oo carqalad ah inuu ruxo diiraddaada, iyo markaad shaqada sii wad, waa lagaa doonayaa inaad la kulanto 'guusha'. Waxay qaadan kartaa waqti, laakiin maahan inaad quusato Adkayso dulqaadkaaga oo waxyaabo ayaa kaligood ku dhici doona goobahooda.
Rumeyso Aayada Eebbe
Rumayso Tirooyinka Mucjisada
Rumeyso Riyooyinka Riyadaada
Rumayso Naftaada Quotes
Rumeyso xigashooyinka Inspirational
Rumeyso xigashooyinka kicinta
Rumeyso xigashooyinka Sawirada
Rumeyso xigashooyinka Gaaban
Qormooyinka Gaaban ee Weyn
Xigashooyin aan macquul aheyn
Ma Jirto Wax Kusoo Kordhin
Quotooyin Gaaban oo awood leh
Xigashooyinka dhiiri gelinta gaaban
Quusin Quusin Gaaban
Xigashooyinka Khamiista Khamiista
Xigashooyinka kicinta khamiista
Waligaa ma aha inaad gorgortankaaga ka gasho qalbi kugu raba halkaas. - Lama yaqaan
Waligaa ma aha inaad gorgortankaaga ka gasho qalbi kugu raba halkaas. - xigashooyinka aan la aqoon
Noloshu had iyo jeer waxay isku dayi doontaa inay arrimaha kugu adkeeyaan, laakiin markasta oo aad caqabadaha ka hor tagtid, waxaad u soo baxaysaa si xoog leh. - Lama yaqaan
Noloshu had iyo jeer waxay isku dayi doontaa inay arrimaha kugu adkeeyaan, laakiin markasta oo aad caqabadaha ka hor tagtid, waad timaadaa…
Waa muhiim in la sameeyo saaxiibbo ka qoto dheer xanta, cabitaanka, iyo dib u dhigashada. Saaxiibo samee oo aad wada hadallo qoto dheer la yeelan karto. Saaxiibo samee oo aad ku dhex ooyi kartaa. Samee saaxiibo taageera himilooyinkaaga nolosha oo kaa rumaysta. - Lama yaqaan
Waa muhiim in la qiimeeyo macnaha dhabta ah ee “saaxiibtinimada.” Qof walbaa ma awoodo inuu fahmo…
Dabaylku weligood ma waaraan. - Lama yaqaan
Badbaadinta adduunka maanta waa adag tahay. Sidaa darteed, waxaan ubaahanahay inaan xasuusano oo ku celcelino xirfadaha nolosha dhabta ah si aan ula dagaallano…
Noqo qof wanaagsan laakiin waqti ha luminin si aad u caddeyso. - Lama yaqaan
Adduunyada maanta, shayga inta ugu badan ee aadanaha ka maqnaa waa daacadnimo, jacayl xagga dadka kale ah, iyo aadanaha. …